आखिर के छ ‘मोदी’ नाम गरेको भेडामा ? यसको मूल्य नै एक करोड पाँच लाख - Aajako Nepali Khabar
Home चाखलाग्दो कुरा आखिर के छ ‘मोदी’ नाम गरेको भेडामा ? यसको मूल्य नै एक करोड पाँच लाख
चाखलाग्दो कुरा admin December 23, 20200Comment
भारतको महाराष्ट्रको सांगली जिल्लाका भेडा पालक बाबु मेटकरीले ७० लाख रुपैयाँमा बेच्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन्। उनले भेडाको मूल्य एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ राखेका छन्।
महाराष्ट्रको भेडा एंव बाख्रा विकास निगमका सहायक निर्देशक डा. सचिन टेकाडेले सन् २००३ को एक सर्वेक्षणअनुसार सांगली जिल्लामा शुद्ध ‘मेडगयाल’ नस्लका पाँच हजार ३१९ भेडा थिए। तर निगमको प्रसारपछि अहिले सांगली जिल्लामा भेडाको संख्या १५० लाख भन्दा धेरै छ। जसमा मेडगयाल नस्लका भेडा धेरै छन्।